Muqdisho (XT) – Madaxweyne ma ogtahay in shacabaka ku nool magaalada Muqdisho oo lagu qiyaaso tiradooda 2 milyan iyo bar ay yihiin, Shacabka kaliya ee dowladda federaalka Soomaaaliya siiya canshuur balse beddelkeeda aan helin adeegyadii dadweyne ee ay dowladda xaquuqda ugu la haayeen.
Madaxweyne, ma laguu sheegay, in shacabka Muqdisho oo canshuur bixiya, waliba mid aysan awooddin in aysan helin adeegyada aasaasiga ah ee ay canshuurta darteeda u dhibaan, sida waddooyin nadiif ah oo laami ah, waxbarasho bilaash ah, xarumo cafimaad oo loogu adeego iyo adeegyada kale oo ay xaqqa ugu leeyihiin dowladdooda.
Mudane Madaxweyne, ma la socotaa in arrintaan ay tahay mid dhibaato wayn ay ku qabaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan Gobolka Banaadir. Madaxweyne mala socotaa sidoo kale in shacabku markii ay cabashadooda gaarsiiyeen Maamulka Gobolka Banaadir in loo sheegay in wax kasta ay gacanta ugu jiraan dowladda Dhexe ee aad Hoggaanka u hayso, Gobolka Banaadir-na uusan awooddin fulinta cabashooyinka dadweynaha ama uusan lahayn awood iyo dhaqaalle uu wax uga qabto.
Jaalle Madaxweyne, maka warqabtaa iyadana in ay jiraan ganacsato Soomaaliyeed oo canshuur u bixiya lacag hal milyan ku dhaw bishii, haddana ay rugta ganacsiga Soomaaliya ay ku maamullaan dillaaleey aan canshuur bixin, oo magaca rugta ku baada ganacsatada iyagoo hab aan munaasib ahayn u adeegsanaya xiriirka kala dhexeeya qaar ka mid ah mas’uuliyiinta Xukuumadda.
Previous articleXiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo heerkii ugu xumaa gaaray
Next articleMadaxwaynaha Jibouti oo la kulmay Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliya (Sawiro)